Trump: Nitanyahu wuu i khayaanay oo dhabarka ayuu iga toogtay - Ilays News
Trump: Nitanyahu wuu i khayaanay oo dhabarka ayuu iga toogtay
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa weerar afka ah ku qaaday Ra’iisul Wasaarihii hore ee Israa’iil Benjamin Netanyahu oo uu ku eedeeyay “Daacad-darro”.
Trump ayaa sheegay in uu ka carooday qaabkii uu Netanyahu ugu hambalyeeyay madaxweyne Joe Biden kadib guushii uu ka gaaray doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ee looga adkaaday Trump sanadkii la soo dhaafay ee 2020-kii.Madaxweynihii hore wuxuu rumaysnaa inuu Israa’iil ka badbaadiyay “burbur.”
Hadalka Trump ayaa yimid xili uu bixinayay waraysiyo ku saabsan buug uu kaga hadlay doorkiisii nabadaynta bariga dhexe. Maamulkii Trump ayaa xiligiisii qaatay siyaasado taageersan Israa’iil oo aan horay loo arag taariikhada mudadii uu jiray xiriirka labada dal.
Netanyahu wuxuu ahaa ra’iisul wasaaraha Israel,markii Trump uu isana ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka,waxaana labada nin ka dhaxeeyay xiriir shaqsiyadeed oo xoogan iyaga oo waliba isku ammaani jiray fagaarayaasha marka ay khudbadaha jeedinayaan.